KuBell iBell ihlawulwa nguMetallica - Izinto Zobugcisa
KuBell iBell ihlawulwa nguMetallica
Amagama asekwe kwinoveli ka-1940 ye-Ernest Hemingway enegama elifanayo. Incwadi imalunga nomMelika onikwe umsebenzi wokuthatha ibhulorho ebibanjwe ngumkhosi wamaFasi kwiMfazwe Yamakhaya yaseSpain- eyandulela iMfazwe yesibini (II). Wathandana emva koko wafumanisa izinto eziphazamisayo ngobomi nokufa.
Anthony -Wichita, KS
Ibinzana elithi 'Ngubani uBell Tolls' ovela kumbongo we-1623 liNgesi uJohn Donne, owabhala wathi:
Thumela ukuba ungazi
Ngubani lo ubiza intsimbi
Incwadi kaHemingway isebenzisa isihloko.
Le ngoma yinkcazo malunga nobuze bemfazwe. Imigca embalwa yokugqibela yengoma iyahluka kwincwadi ukwenza eli nqaku.
Le yenye ingoma apho isitayile esikhethekileyo sikaCliff Burton sihlala siphazanyiswa sisigingci solo. UBurton wadlala isingeniso esebenzisa ukukhanya kokukhanya kwi-bass yakhe.
NgokukaKirk Hammett, uBurton wayedlala rhoqo i-intro bass riff xa abo babini bexhonywe kwigumbi labo lehotele. Igitare ikhumbula ukuba Amatye agiqekayo Kwi-2014: 'Wayehlala ephethe isigingci esimnandi awayekuso ukuze akwazi ukugoba imitya. Ngapha koko, xa wayedlala loo riff, ndicinga ukuba, 'Leyo yinto engaqhelekanga, enobunzima be-atonal engenzima kwaphela.' '
Ndiyamkhumbula eyidlalela uJames (Hetfield, amazwi), kunye noJames bongeze loo nto kuye ngequbuliso, yatshintsha, 'wongeze watsho uHammett. Yinto ephambeneyo. Kude kube namhla, ndicinga ukuba, 'wayibhala njani loo nto?' Nanini na xa ndisiva kule mihla, kufana nokuthi, 'Kulungile, uCliff usesendlwini.'
UBurton, Hetfield kunye noLars Ulrich ngababhali abaziwayo kwingoma.
Khwela uMbane yicwecwe lesibini leMetallica, kunye neyokuqala eyenziwe nguFlemming Rasmussen, owayesebenza kwiialbhamu zabo ezimbini ezilandelayo. Weza ebhodini xa ibhendi yathatha isigqibo sokurekhoda i-albhamu eYurophu, apho ixesha les studio lalibiza imali encinci kakhulu kunaseMelika ngenxa yenqanaba lotshintshiselwano oluhle. Bakhethe iRasmussen's Sweet Silence Studios eCopenhagen kwaye bamsebenzisa njengenjineli kunye nomvelisi kunye (kunye neqela).
Kule ngoma, bazame into entsha. 'Ngubani uBell Toll' ayengoma yokuqala esakhe sayenza, 'utshilo uRasmussen kudliwanondlebe neengoma. Yayiyinto ekhohlisayo leyo. Ikwayiloo Lars yokufunda indlela yokudlala ngokunqakraza. '
Ingoma ivula ngokurhafiswa kwentsimbi, ekhalayo kwimizuzu yonke yokuqala yengoma ngaphambi kokuphela kancinci. Ingoma yesibini edume kakhulu yokwenza oku, ukubeka emva kwe-AC / DC 'yeeHell's Bells,' kwi-albhamu yabo ka-1980 Okumnyama Kokumnyama .
Iibhendi zazifumana intsimbi yazo ngendlela eyahlukileyo; I-AC / DC iyalele isiko, itoni enye yentsimbi ukusuka kwisiseko kwaye sayirekhoda kusetyenziswa iyunithi yeselfowuni kunye nee-microphone ezili-15. I-Metallica isebenzise isandi kwiziphumo.
'Sihlele kwimpembelelo yentsimbi ukuze ilingane kwaye ibekho,' utshilo uFlemming Rasmussen kwiNgoma eziFumanekileyo. Ndiyikhuphele kwaye ndiyisika apho bekufanele ukuba ize khona. Ke, nje ukuba iapeyiphu iqale kwindawo elungileyo, yayizidlalela yona, emva koko sayilahla kumkhondo wama-24. '
tame impala kuncinci endikwazi ngcono intsingiselo
Amazwi ayikho intaba ephakamileyo ngokwaneleyo
monica omncinci ebomini bam lyrics
kwakukhe kwakho indlela yokubuyela kwibheles ekhaya
amazwi omculo wawunosuku olubi